The Best Cheap Smartphones For Every Budget | Net Guide
Home Article The Best Cheap Smartphones For Every Budget
အဆငျ့မွငျ့စမတျဖုနျးတှကွေီးပဲ တောကျလြှောကျထှကျနတေဲ့အခြိနျမှာ လူအမြားစုအတှကျ စြေးပေါတဲ့ စမတျဖုနျးတှဆေိုတာလညျး လိုအပျနပွေနျပါတယျ။ အခွားနှဈတှမှောလညျး ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဘတျဂတျြဖုနျးတှထေဲကနေ စြေးသကျသာပွီး စှမျးဆောငျရညျကောငျးတဲ့ဖုနျးတှေ ရှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘတျဂတျြဖုနျးလညျး ဖွဈရမယျ။ လူအမြားစုလညျး အသုံးပွုနိုငျရမယျ။ ပွီးတော့ အဲ့ဒီဖုနျးက အရညျအသှေးပိုငျးမှာလညျး အနအေထားတဈခုလောကျမှာ ရှိနရေမယျဆိုပွီး အခကျြအလကျပေါငျးမြားစှာနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ဖုနျးတှကေို ရှာဖှခေဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီဖုနျးတှကေတော့
(1). Best Cheap Phone : Xiaomi Redmi Note 7
Redmi Note7ဟာ ကုမ်ပဏီရဲ့ သီးသနျ့အမှတျတံဆိပျအဖွဈ စတငျပွီး ထုတျလိုကျရတဲ့ဖုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးရဲ့ အားသာခကျြပိုငျးအနနေဲ့ ဘကျထရီသကျတမျး တာရှညျခံမယျ၊ စှမျးဆောငျရညျကောငျးမယျ၊ အားနညျးခကျြလို့ ဆိုရမှာက NFC မပါဘူး။ မိုနိုစပီကာကို သုံးပေးထားတယျ။ အဲ့ဒါတှကေလှဲရငျ ဒီဖုနျးဟာ ဘတျဂတျြဖုနျးတှထေဲမှာ အတျောစှမျးဆောငျရညျကောငျးတဲ့ဖုနျးလို့ သတျမှတျနိုငျလိမျ့မယျ။ 48-megapixel ကငျမရာကို သုံးလာပွီး 5-megapixel depth module ထပျထညျ့ပေးထားတယျ။ ဒီလိုဆငျဆာအမြိုးအစားကိုတော့ Motorola One Vision က စလို့ OnePlus7Pro လောကျထိတောငျ တှနေို့ငျလိမျ့မယျ။ ကငျမရာအတှကျ optical image stabilisation (OIS) မထညျ့ထားဘူးဆိုရငျတောငျ ဓာတျပုံတှရေိုကျဖို့ အတျောကောငျးတဲ့ ဖုနျးအဖွဈ သတျမှတျနိုငျလိမျ့မယျ။ မကျြနှာပွငျ 6.3-inch 2340×1080 pixel LCD display မှာ Qualcomm Snapdragon 660 ကို သုံးထားတယျ။ အရှကေ့ငျမရာကတော့ 13-megapixel ဖွဈတယျ။ ဘကျထရီကတော့ တာရှညျခံဆိုတဲ့အတိုငျးပဲ 4000 mAh ကို သုံးနိုငျမှာပါ။
(2). Best For £300 : Moto G8 Plus
စြေးနှုနျးနဲ့လိုကျဖကျညီတဲ့ အရညျအသှေးနဲ့အတူ ပိုကောငျးတဲ့ စပီကာကို ဒီဖုနျးမှာ တှရေ့မှာပါ။ G7 Plus ဖုနျးထကျ ပိုကောငျးတဲ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုတှေ ဒီဖုနျးမှာ မတှရေ့ဘူး။ ပွီးတော့ ကငျမရာမှာလညျး အကနျ့အသတျရှိနတေယျ။ ပွီးတော့ စြေးနှုနျးနဲ့ လိုကျဖကျညီတဲ့ စှမျးဆောငျခကျြကို ဒီဖုနျးမှာ တှရေ့မှာပါ။ ဒီဖုနျးမှာ 6.3-inch မကျြနှာပွငျနဲ့ဖွဈပွီး ကြောဘကျမှာ ကငျမရာဆငျဆာ3ခု ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာတှကေ 48-megapixel, f/1.7 main, 16-megapixel ultra-wide နဲ့ 5-megapixel depth ဆငျဆာတို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့တငျ့လြောကျပတျတဲ့ အရောငျနဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ထုတျပေးမှာပါ။ Android 10 ကို အဆငျ့မွှငျ့ပေးမှာဖွဈပွီး2နှဈအထိ Security Patch တှေ ရမှာပါ။ အနောကျဘကျမှာ လကျဗှရောကိရိယာ တပျဆငျထားပါတယျ။ ဘကျထရီကတော့ 4000 mAh ဖွဈပွီး တဈခါအားသှငျးထားရငျ နာရီ 40 သုံးနိုငျပါတယျ။ 15W TurboPower ပါပါတယျ။ ပရိုဆကျဆာပိုငျးအတှကျ Snapdragon 665 chipset နဲ့အတူ 4GB RAM ကို သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ပလတျစတဈကိုယျထညျ တပျဆငျထားပွီး ရစေကျရပေေါကျတှကေို ခံနိုငျပါတယျ။
(3). Best For Flagship Quality : Xiaomi Mi 9
နောကျထပျ Xiaomi ဖုနျးတဈလုံးဖွဈပွီး စှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာ ကောငျးတဲ့အပွငျ မကျြနှာပွငျရော၊ ကငျမရာရောက သုံးစှဲသူစိတျတိုငျးကြ စှမျးဆောငျပေးနိုငျလိမျ့မယျ။ အားနညျးခကျြကတော့ ရစေိုဒဏျမခံနိုငျတာပဲ။ ဒါကလညျး သိပျတော့ ပွဿနာမဟုတျပါဘူး။ ဖုနျးသုံးမှာဆိုတော့ စှမျးဆောငျရညျကောငျးဖို့ကပဲ အဓိကကမြှာပါ။ စြေးနှုနျးနဲ့ စှမျးဆောငျခကျြပိုငျးမှာ2ဆလောကျကှာတဲ့ ဖုနျးကို ရှာမယျဆိုရငျ Mi9 က အဲ့လိုဖုနျးမြိုးပါ။ ဒီဖုနျးမှာ စြေးမွငျ့တဲ့ ဖုနျးတှမှောသာပါတဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှဖွေဈတဲ့ Snapdragon 855 chipset ၊ 6.4-inch OLED display တှနေဲ့ ကငျမရာ3လုံး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒီလိုစြေးနှုနျးနဲ့ ဖုနျးမြိုးဆိုတာ ရှာရှငျမတှနေို့ငျလောကျသလိုပါဘဲ။ Mi9ဟာ Xiaomi ရဲ့ ပထမဆုံး ကငျမရာသုံးလုံးတှဲဖုနျးဖွဈပွီး အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက ထှကျခဲ့တဲ့ စမတျဖုနျးတှထေဲမှာ အမွနျဆုံး ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈပါဝငျတဲ့ ဖုနျးတဈလုံး ဖွဈပါတယျ။ နောကျကြောကျဘကျမှာ 48MP ကငျမရာဖွဈပွီး Quad Bayer filer နဲ့ Sony IMX586 sensor ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ Wide angle ရိုကျဖို့အတှကျ 16MP ultra-wide camera ပါဝငျပွီး 117 ဒီဂရီအထိ မွငျကှငျးကယျြ ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ Autofocus ပါတဲ့ f/2.2 lens နဲ့4စငျတီမီတာအကှာကနေ macros ပုံတှလေညျး ရိုကျနိုငျမှာပါ။ မကျြနှာပွငျ 6.39 လကျမ အရှယျအစားထိရှိပွီး FHD+ အရညျအသှေးရှိ Super AMOLED Display ဖွဈပါတယျ။ ဘကျထရီကတော့ 3300 mAh ဖွဈပါတယျ။ Chipset အနနေဲ့ Snapdragon 855 သုံးထားပွီး 6GB နဲ့ 8GB RAM ပါဝငျကာ 64GB Storage နဲ့ 128GB Storage ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ CPU နဲ့ GPU လုပျဆောငျမှုကို ခြိနျညှိပေးမယျ့ Game Turbo စနဈလညျး တှရေ့ဦးမှာပါ။
(4). Best For Battery Life : OPPO A5 2020
ကွီးမားတဲ့ မကျြနှာပွငျ၊ ကွီးမားတဲ့ ဘကျထရီဆိုတဲ့ အတှဲအဖကျကပဲ ဒီဖုနျးကို ဘတျဂတျြဖုနျးတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံး စာရငျးဝငျသှားတာပါ။ အကောငျးဆုံးတှထေဲက ဆိုးတာလေးတှေ ဖွညျ့ပွောရရငျတော့ 720p screen နဲ့ နောကျကြောဘကျက ပလပျစတဈဖွဈနတောပါဘဲ။ OPPO A5 2020 ဟာ ဘကျထရီသကျတမျး အကောငျးဆုံးဖုနျးတှထေဲမှာ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိတဲ့ဖုနျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကွီးမားတဲ့ Screen အတှကျ နညျးပါးတဲ့ resolution က စြေးနှုနျးနဲ့ယှဉျလိုကျမယျဆိုရငျ မပွောပလောကျတဲ့ ပွဿနာလို့ ဆိုရမှာပါ။ Snapdragon 665 chipset က ကောငျးမှနျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပေးမှာဖွဈပွီး သိုလှောငျမှုအတှကျ 64GB ဖွဈမှာပါ။ 3GB RAM နဲ့အတူ နောကျဘကျ ကငျမရာ4လုံးဆိုတာကလညျး ဒီဖုနျးကို ရှေးခယျြဖို့ နောကျထပျ အကွောငျးရငျးတဈခု ဖွဈနပွေနျပါတယျ။ ကငျမရာတှကေတော့ 12MP ၊ 8MP နဲ့ 2MP sensors2ခုပါ။ လကျရှိအခြိနျဆိုရငျ 6GB RAM မျောဒယျတောငျ ထှကျနပေါပွီ။ 119° Ultra Wide ဓာတျပုံမြားကို ရိုကျကူးနိုငျမယျ့အပွငျ Ultra Night Mode 2.0 ပါဝငျလာတဲ့အတှကျ ညအခြိနျ ဓာတျပုံတှေ ရိုကျကူးရာမှာ ကွညျလငျပွတျသားတဲ့ ပုံရိပျတှကေို ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
(5). Best For Battery Life (Option 2) : Moto G7 Power
ဒါကလညျး နောကျထပျ ဘကျထရီသကျတမျးကောငျးတဲ့ ဖုနျးတဈလုံး ဖွဈပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာလညျး ကွံ့ခိုငျပွီး ကွညျ့ကောငျးတဲ့ ပုံစံဒီဇိုငျးကို တှရေ့မှာပါ။ voice ချေါဆိုမှုတှေ ရောနှောတာနဲ့ ကငျမရာစှမျးဆောငျရညျ ပုံမှနျအတိုငျးရှိတာလေးပဲ ပွောစရာပါ။ ဒီဖုနျးဆီကနေ စြေးသကျသာတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကိုပဲ သငျ့အနနေဲ့ ရရှိမှာပါ။ Moto G7 Power features ပိုငျးအနနေဲ့ low-resolution screen – 1520×720 pixels ကို တှရေ့မှာဖွဈပွီး နောကျဘကျကငျမရာကလညျး သိပျအကောငျးကွီး မဟုတျပါဘူး။ 12-megapixel f/2.0 ကငျမရာတဈလုံးသာပါဝငျပွီး LED flash တဈခု ပါဝငျတာကို တှရေ့မှာပါ။ ဘတျဂတျြဖုနျးတှထေဲက ဘတျဂတျြအကဆြုံးလို့ ဆိုနိုငျမယျ့ ဒီဖုနျးမှာ ပရိုဆကျဆာအတှကျ Qualcomm Snapdragon 632 CPU သုံးထားပွီး 4GB RAM နဲ့အတူ Adreno 506 GPU ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ ဒီဖုနျးမှာ Android 9.0 ကို ထညျ့ပေးထားပွီး stock Android အတှအေ့ကွုံနဲ့ သုံးနိုငျမှာပါ။
(6). Best For Under £200 : Honor 10 Lite
Feature တှေ စုံစုံလငျလငျ ပါတယျ။ သငျ့တငျ့တဲ့ ဘကျထရီဆိုတာနဲ့တငျ ဒီဖုနျးက ရှေးခယျြစရာ ဖွဈနပေါတယျ။ စြေးနှုနျးနဲ့ လိုကျဖကျညီတဲ့ ဒီဇိုငျးကိုလညျး ရပါလိမျ့မယျ။ ကောငျးကှကျတှနေဲ့အတူ ဆိုးကှကျလေးတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ ပလပျစတဈနဲ့ ပွုလုပျထားတာဖွဈပွီး ဆောဖျ့ဝဲလျကလညျး နညျးနညျးလေးပါတယျ။ fingerprints ကလညျး နညျးနညျးလှမျးတဲ့ပုံစံမြိုး ဖွဈနပေါတယျ။ Honor 10 2018 flagship ဖုနျးတှထေဲမှာတော့ အတျောကောငျးတဲ့ဖုနျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ နောကျဆုံးပျေါ Android အခွပွေု UI ကို သုံးနိုငျမှာဖွဈပွီး Emotion UI9ကို သုံးနိုငျမှာပါ။ သူ့မှာ 6.21 လကျမ Full HD+ Display ပါပွီး 90% Screen-to-body Ratio ဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျမှာ Waterdrop Notch ပါပါတယျ။ Kirin 710 SoC မောငျးနှငျထားပါတယျ။ 6GB RAM အထိ ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ GPU Turbo 2.0 လညျး ပါပါတယျ။ Android 9.0 Pie အခွပွေု EMUI 9.0 ထညျ့ထားပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ 13MP f/1.8 Camera နဲ့ 2MP Depth Camera မြားပါပွီး မတူညီတဲ့ ရှုခငျး 22 ခုကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျတဲ့ AI Portrait နဲ့ AI Scene Detection မြား ပါပါတယျ။ AI Selfie ပါတဲ့ 24MP Front Camera ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ အနောကျဘကျကို ဖနျဖွငျ့ ဖုံးအုပျထားပါတယျ။ လကျဗှရောကိရိယာကို အနောကျဘကျမှာ မွှုပျနှံထားပွီး 3400 mAh Battery ပါပါတယျ။
(7). Solid All-Rounder : Huawei P Smart (2019)
သငျ့တငျ့တဲ့ စြေးနှုနျး၊ ကောငျးမှနျတဲ့ ကငျမရာနဲ့ software ပိုငျးဆိုငျရာ လုပျဆောငျခကျြမြားစှာ ပါဝငျမှုဟာ ဒီဖုနျးကို ဘတျဂတျြတှထေဲမှာ လူသိမြားစပွေီး earpiece speaker နရောခထြားတဲ့ပုံစံနဲ့ micro USB အသုံးပွုမှု၊ ပလပျစတဈကိုယျထညျမှာ လကျဗှဖေတျစနဈထားသိုမှု မမှနျတာတှကေ ဒီဖုနျးကို အားနညျးသှားစပေါတယျ။ သူ့မှာ 6.2 လကျမ FullHD+ Display ထညျ့သှငျးထားပွီး Waterdrop Notch ပါတယျ။ P Smart+ လိုပဲ သူ့မှာ Kirin 710 Chipset မောငျးနှငျထားပါတယျ။ သူ့အတှကျ မနျမိုရီတဈမြိုးသာ ထုတျလုပျထားပွီး 3GB RAM, 64GB Storage မြား ဖွဈပါတယျ။ Hybrid Dual SIM Slot ပါတဲ့အတှကျ micro SD Card စိုကျနိုငျပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ 13MP + 2MP Dual Camera နဲ့ အရှဘေ့ကျမှာ 8MP Camera မြား ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ Android9Pie အခွပွေု EMUI ထညျ့ထားပါတယျ။ 3400 mAh Battery ပါပါတယျ။ micro USB, 3.5mm Headphone Jack မြား ပါပါတယျ။
(8). Best For £100 : Motorola Moto E6 Plus
ပွညျ့စုံတဲ့ အရညျအသှေး၊ ရှငျးပတဲ့ မကျြနှာပွငျတှဟော ဒီဖုနျးရဲ့ ကောငျးကှကျတှလေို့ ဆိုနိုငျပွီး အားသှငျးတဲ့အပိုငျး နှေးတာမြိုးနဲ့ Apps နဲ့ games တှေ သုံးတဲ့အခြိနျမှာ နှေးတာမြိုးကလညျး ပုံမှနျဖုနျးသုံးတဲ့ သူတဈယောကျအတှကျဆိုရငျ အတျောမကောငျးတာပါ။ ဒါပမေယျ့ စြေးနှုနျးကို ကွညျ့လိုကျရငျတော့ ဒီဖုနျးမှာ ဒီလောကျပဲပါတယျဆိုတာက ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ HD+ Max Vision Display နဲ့ Dual Rear ကငျမရာတှကေ ဒီဖုနျးနဲ့ ဒီစြေး တနျပါတယျ။ သူ့မှာ 6.1 လကျမ HD+ Max Vision Display နဲ့ MediaTekHelio P22 Chipset ထညျ့ထားပါတယျ။ 2GB RAM, Android 9.0 Pie ပါပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ 13MP နဲ့ 2MP Dual Cameras တှေ ထညျ့ထားပါတယျ။ 8MP Front Camera ပါပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ လကျဗှရောအာရုံခံကိရိယာ မွှုပျနှံထားပါတယျ။ ဘကျထရီစှမျးအားကတော့ 3000 mAh ဖွဈပွီး ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုအတှကျ 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Micro USB တှေ ပါဝငျပါတယျ။
(9). Good For Quality : Xiaomi Mi A2
စှမျးဆောငျရညျနဲ့ စြေးနှုနျး ထပျတူကတြဲ့ဖုနျးလို့ သတျမှတျနိုငျပွီး Dual cameras နဲ့ Pure Android ဖွဈတာတှကေ ဒီဖုနျးရဲ့ အားသာခကျြပါ။ 5.99” IPS LCD display, Resolution 1080 × 2160 pixel, contrast ratio 1500:1, Gorilla Glass5ဒါတှကေတော့ Display ရဲ့ Spec တှပေါ။ Mi A1 နဲ့ယှဉျရငျတော့ Dimensiion တူသလောကျ နီးနီးကိုမှ သူက 3mm လောကျ နညျးနညျးပိုရှညျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Selfie ကငျမရာက 20MP ရှိတဲ့ Sony IMX376 sensor ကို သုံးထားပွီး Light Sensitivity ပိုကောငျးလာပါတယျ။ Selfie အတှကျ LED flash ထညျ့ပေးထားတဲ့အပွငျ AI Effect နဲ့ ပွုပွငျနိုငျပွီး ပိုကောငျးလာတာက Selfie အတှကျပါ HDR mode ကို ထညျ့ပေးလာခွငျးပါ။ နောကျဘကျ dual camera ကတော့ aperture f/1.75 ရှိတဲ့ 20MP Sony IMX376 sensor နဲ့ 12MP Sony IMX486 sensor ကို သုံးထားပါတယျ။ sensor2ခုလုံးက Aperture size တူပမေယျ့ 12MP sensor က 1.25µm ဖွဈတဲ့အတှကျ pixel size ပိုကွီးသှားပါတယျ။ ကိုယျရိုကျမယျ့ မွငျကှငျးကိုလိုကျပွီး sensor2ခုကို Manual ပွောငျးလို့ ရပါတယျ။ Mi A2 ဖုနျးတှမှောတော့ Snapdragon 660 chipset တှကေို သုံးထားပွီး Base Model အတှကျ RAM 4GB က စပါတယျ။
အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတွေကြီးပဲ တောက်လျှောက်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ လူအများစုအတွက် ဈေးပေါတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဆိုတာလည်း လိုအပ်နေပြန်ပါတယ်။ အခြားနှစ်တွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေထဲကနေ ဈေးသက်သာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေ ရွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းလည်း ဖြစ်ရမယ်။ လူအများစုလည်း အသုံးပြုနိုင်ရမယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီဖုန်းက အရည်အသွေးပိုင်းမှာလည်း အနေအထားတစ်ခုလောက်မှာ ရှိနေရမယ်ဆိုပြီး အချက်အလက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဖုန်းတွေကို ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖုန်းတွေကတော့
Redmi Note7ဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ သီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် စတင်ပြီး ထုတ်လိုက်ရတဲ့ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းရဲ့ အားသာချက်ပိုင်းအနေနဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်း တာရှည်ခံမယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမယ်၊ အားနည်းချက်လို့ ဆိုရမှာက NFC မပါဘူး။ မိုနိုစပီကာကို သုံးပေးထားတယ်။ အဲ့ဒါတွေကလွဲရင် ဒီဖုန်းဟာ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အတော်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ 48-megapixel ကင်မရာကို သုံးလာပြီး 5-megapixel depth module ထပ်ထည့်ပေးထားတယ်။ ဒီလိုဆင်ဆာအမျိုးအစားကိုတော့ Motorola One Vision က စလို့ OnePlus7Pro လောက်ထိတောင် တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။ ကင်မရာအတွက် optical image stabilisation (OIS) မထည့်ထားဘူးဆိုရင်တောင် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ အတော်ကောင်းတဲ့ ဖုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ မျက်နှာပြင် 6.3-inch 2340×1080 pixel LCD display မှာ Qualcomm Snapdragon 660 ကို သုံးထားတယ်။ အရှေ့ကင်မရာကတော့ 13-megapixel ဖြစ်တယ်။ ဘက်ထရီကတော့ တာရှည်ခံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ 4000 mAh ကို သုံးနိုင်မှာပါ။
ဈေးနှုန်းနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့အတူ ပိုကောင်းတဲ့ စပီကာကို ဒီဖုန်းမှာ တွေ့ရမှာပါ။ G7 Plus ဖုန်းထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဒီဖုန်းမှာ မတွေ့ရဘူး။ ပြီးတော့ ကင်မရာမှာလည်း အကန့်အသတ်ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကို ဒီဖုန်းမှာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီဖုန်းမှာ 6.3-inch မျက်နှာပြင်နဲ့ဖြစ်ပြီး ကျောဘက်မှာ ကင်မရာဆင်ဆာ3ခု ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေက 48-megapixel, f/1.7 main, 16-megapixel ultra-wide နဲ့ 5-megapixel depth ဆင်ဆာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အရောင်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ထုတ်ပေးမှာပါ။ Android 10 ကို အဆင့်မြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး2နှစ်အထိ Security Patch တွေ ရမှာပါ။ အနောက်ဘက်မှာ လက်ဗွေရာကိရိယာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 4000 mAh ဖြစ်ပြီး တစ်ခါအားသွင်းထားရင် နာရီ 40 သုံးနိုင်ပါတယ်။ 15W TurboPower ပါပါတယ်။ ပရိုဆက်ဆာပိုင်းအတွက် Snapdragon 665 chipset နဲ့အတူ 4GB RAM ကို သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည် တပ်ဆင်ထားပြီး ရေစက်ရေပေါက်တွေကို ခံနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Xiaomi ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့အပြင် မျက်နှာပြင်ရော၊ ကင်မရာရောက သုံးစွဲသူစိတ်တိုင်းကျ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ ရေစိုဒဏ်မခံနိုင်တာပဲ။ ဒါကလည်း သိပ်တော့ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းသုံးမှာဆိုတော့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းဖို့ကပဲ အဓိကကျမှာပါ။ ဈေးနှုန်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ပိုင်းမှာ2ဆလောက်ကွာတဲ့ ဖုန်းကို ရှာမယ်ဆိုရင် Mi9 က အဲ့လိုဖုန်းမျိုးပါ။ ဒီဖုန်းမှာ ဈေးမြင့်တဲ့ ဖုန်းတွေမှာသာပါတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Snapdragon 855 chipset ၊ 6.4-inch OLED display တွေနဲ့ ကင်မရာ3လုံး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလိုဈေးနှုန်းနဲ့ ဖုန်းမျိုးဆိုတာ ရှာရှင်မတွေ့နိုင်လောက်သလိုပါဘဲ။ Mi9ဟာ Xiaomi ရဲ့ ပထမဆုံး ကင်မရာသုံးလုံးတွဲဖုန်းဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အမြန်ဆုံး ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျောက်ဘက်မှာ 48MP ကင်မရာဖြစ်ပြီး Quad Bayer filer နဲ့ Sony IMX586 sensor ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Wide angle ရိုက်ဖို့အတွက် 16MP ultra-wide camera ပါဝင်ပြီး 117 ဒီဂရီအထိ မြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Autofocus ပါတဲ့ f/2.2 lens နဲ့4စင်တီမီတာအကွာကနေ macros ပုံတွေလည်း ရိုက်နိုင်မှာပါ။ မျက်နှာပြင် 6.39 လက်မ အရွယ်အစားထိရှိပြီး FHD+ အရည်အသွေးရှိ Super AMOLED Display ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 3300 mAh ဖြစ်ပါတယ်။ Chipset အနေနဲ့ Snapdragon 855 သုံးထားပြီး 6GB နဲ့ 8GB RAM ပါဝင်ကာ 64GB Storage နဲ့ 128GB Storage ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ CPU နဲ့ GPU လုပ်ဆောင်မှုကို ချိန်ညှိပေးမယ့် Game Turbo စနစ်လည်း တွေ့ရဦးမှာပါ။
ကြီးမားတဲ့ မျက်နှာပြင်၊ ကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီဆိုတဲ့ အတွဲအဖက်ကပဲ ဒီဖုန်းကို ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး စာရင်းဝင်သွားတာပါ။ အကောင်းဆုံးတွေထဲက ဆိုးတာလေးတွေ ဖြည့်ပြောရရင်တော့ 720p screen နဲ့ နောက်ကျောဘက်က ပလပ်စတစ်ဖြစ်နေတာပါဘဲ။ OPPO A5 2020 ဟာ ဘက်ထရီသက်တမ်း အကောင်းဆုံးဖုန်းတွေထဲမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ဖုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကြီးမားတဲ့ Screen အတွက် နည်းပါးတဲ့ resolution က ဈေးနှုန်းနဲ့ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် မပြောပလောက်တဲ့ ပြဿနာလို့ ဆိုရမှာပါ။ Snapdragon 665 chipset က ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးမှာဖြစ်ပြီး သိုလှောင်မှုအတွက် 64GB ဖြစ်မှာပါ။ 3GB RAM နဲ့အတူ နောက်ဘက် ကင်မရာ4လုံးဆိုတာကလည်း ဒီဖုန်းကို ရွေးချယ်ဖို့ နောက်ထပ် အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေကတော့ 12MP ၊ 8MP နဲ့ 2MP sensors2ခုပါ။ လက်ရှိအချိန်ဆိုရင် 6GB RAM မော်ဒယ်တောင် ထွက်နေပါပြီ။ 119° Ultra Wide ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်မယ့်အပြင် Ultra Night Mode 2.0 ပါဝင်လာတဲ့အတွက် ညအချိန် ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးရာမှာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလည်း နောက်ထပ် ဘက်ထရီသက်တမ်းကောင်းတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း ကြံ့ခိုင်ပြီး ကြည့်ကောင်းတဲ့ ပုံစံဒီဇိုင်းကို တွေ့ရမှာပါ။ voice ခေါ်ဆိုမှုတွေ ရောနှောတာနဲ့ ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည် ပုံမှန်အတိုင်းရှိတာလေးပဲ ပြောစရာပါ။ ဒီဖုန်းဆီကနေ ဈေးသက်သာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုပဲ သင့်အနေနဲ့ ရရှိမှာပါ။ Moto G7 Power features ပိုင်းအနေနဲ့ low-resolution screen – 1520×720 pixels ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဘက်ကင်မရာကလည်း သိပ်အကောင်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ 12-megapixel f/2.0 ကင်မရာတစ်လုံးသာပါဝင်ပြီး LED flash တစ်ခု ပါဝင်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေထဲက ဘတ်ဂျတ်အကျဆုံးလို့ ဆိုနိုင်မယ့် ဒီဖုန်းမှာ ပရိုဆက်ဆာအတွက် Qualcomm Snapdragon 632 CPU သုံးထားပြီး 4GB RAM နဲ့အတူ Adreno 506 GPU ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ Android 9.0 ကို ထည့်ပေးထားပြီး stock Android အတွေ့အကြုံနဲ့ သုံးနိုင်မှာပါ။
Feature တွေ စုံစုံလင်လင် ပါတယ်။ သင့်တင့်တဲ့ ဘက်ထရီဆိုတာနဲ့တင် ဒီဖုန်းက ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုလည်း ရပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းကွက်တွေနဲ့အတူ ဆိုးကွက်လေးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ပလပ်စတစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဆောဖ့်ဝဲလ်ကလည်း နည်းနည်းလေးပါတယ်။ fingerprints ကလည်း နည်းနည်းလှမ်းတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ Honor 10 2018 flagship ဖုန်းတွေထဲမှာတော့ အတော်ကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် Android အခြေပြု UI ကို သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Emotion UI9ကို သုံးနိုင်မှာပါ။ သူ့မှာ 6.21 လက်မ Full HD+ Display ပါပြီး 90% Screen-to-body Ratio ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်မှာ Waterdrop Notch ပါပါတယ်။ Kirin 710 SoC မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ 6GB RAM အထိ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ GPU Turbo 2.0 လည်း ပါပါတယ်။ Android 9.0 Pie အခြေပြု EMUI 9.0 ထည့်ထားပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 13MP f/1.8 Camera နဲ့ 2MP Depth Camera များပါပြီး မတူညီတဲ့ ရှုခင်း 22 ခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ AI Portrait နဲ့ AI Scene Detection များ ပါပါတယ်။ AI Selfie ပါတဲ့ 24MP Front Camera ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အနောက်ဘက်ကို ဖန်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ လက်ဗွေရာကိရိယာကို အနောက်ဘက်မှာ မြှုပ်နှံထားပြီး 3400 mAh Battery ပါပါတယ်။
သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ကင်မရာနဲ့ software ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပါဝင်မှုဟာ ဒီဖုန်းကို ဘတ်ဂျတ်တွေထဲမှာ လူသိများစေပြီး earpiece speaker နေရာချထားတဲ့ပုံစံနဲ့ micro USB အသုံးပြုမှု၊ ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်မှာ လက်ဗွေဖတ်စနစ်ထားသိုမှု မမှန်တာတွေက ဒီဖုန်းကို အားနည်းသွားစေပါတယ်။ သူ့မှာ 6.2 လက်မ FullHD+ Display ထည့်သွင်းထားပြီး Waterdrop Notch ပါတယ်။ P Smart+ လိုပဲ သူ့မှာ Kirin 710 Chipset မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ သူ့အတွက် မန်မိုရီတစ်မျိုးသာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး 3GB RAM, 64GB Storage များ ဖြစ်ပါတယ်။ Hybrid Dual SIM Slot ပါတဲ့အတွက် micro SD Card စိုက်နိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 13MP + 2MP Dual Camera နဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ 8MP Camera များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Android9Pie အခြေပြု EMUI ထည့်ထားပါတယ်။ 3400 mAh Battery ပါပါတယ်။ micro USB, 3.5mm Headphone Jack များ ပါပါတယ်။
ပြည့်စုံတဲ့ အရည်အသွေး၊ ရှင်းပတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေဟာ ဒီဖုန်းရဲ့ ကောင်းကွက်တွေလို့ ဆိုနိုင်ပြီး အားသွင်းတဲ့အပိုင်း နှေးတာမျိုးနဲ့ Apps နဲ့ games တွေ သုံးတဲ့အချိန်မှာ နှေးတာမျိုးကလည်း ပုံမှန်ဖုန်းသုံးတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင် အတော်မကောင်းတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဈေးနှုန်းကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဒီဖုန်းမှာ ဒီလောက်ပဲပါတယ်ဆိုတာက ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ HD+ Max Vision Display နဲ့ Dual Rear ကင်မရာတွေက ဒီဖုန်းနဲ့ ဒီဈေး တန်ပါတယ်။ သူ့မှာ 6.1 လက်မ HD+ Max Vision Display နဲ့ MediaTekHelio P22 Chipset ထည့်ထားပါတယ်။ 2GB RAM, Android 9.0 Pie ပါပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 13MP နဲ့ 2MP Dual Cameras တွေ ထည့်ထားပါတယ်။ 8MP Front Camera ပါပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ မြှုပ်နှံထားပါတယ်။ ဘက်ထရီစွမ်းအားကတော့ 3000 mAh ဖြစ်ပြီး ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Micro USB တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဈေးနှုန်း ထပ်တူကျတဲ့ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး Dual cameras နဲ့ Pure Android ဖြစ်တာတွေက ဒီဖုန်းရဲ့ အားသာချက်ပါ။ 5.99” IPS LCD display, Resolution 1080 × 2160 pixel, contrast ratio 1500:1, Gorilla Glass5ဒါတွေကတော့ Display ရဲ့ Spec တွေပါ။ Mi A1 နဲ့ယှဉ်ရင်တော့ Dimensiion တူသလောက် နီးနီးကိုမှ သူက 3mm လောက် နည်းနည်းပိုရှည်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Selfie ကင်မရာက 20MP ရှိတဲ့ Sony IMX376 sensor ကို သုံးထားပြီး Light Sensitivity ပိုကောင်းလာပါတယ်။ Selfie အတွက် LED flash ထည့်ပေးထားတဲ့အပြင် AI Effect နဲ့ ပြုပြင်နိုင်ပြီး ပိုကောင်းလာတာက Selfie အတွက်ပါ HDR mode ကို ထည့်ပေးလာခြင်းပါ။ နောက်ဘက် dual camera ကတော့ aperture f/1.75 ရှိတဲ့ 20MP Sony IMX376 sensor နဲ့ 12MP Sony IMX486 sensor ကို သုံးထားပါတယ်။ sensor2ခုလုံးက Aperture size တူပေမယ့် 12MP sensor က 1.25µm ဖြစ်တဲ့အတွက် pixel size ပိုကြီးသွားပါတယ်။ ကိုယ်ရိုက်မယ့် မြင်ကွင်းကိုလိုက်ပြီး sensor2ခုကို Manual ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ Mi A2 ဖုန်းတွေမှာတော့ Snapdragon 660 chipset တွေကို သုံးထားပြီး Base Model အတွက် RAM 4GB က စပါတယ်။
Previous articleVeritas Demo
Next articleHonor Play 9A ကို မတျလ 30 ရကျနတှေ့ငျ မိတျဆကျမညျ
Black Friday History : What To Expect And Where To Shop